Madota eOahu akavhura nyika shooter yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Madota eOahu mutambo wevhidhiyo ine rakasununguka nyika yakavhurika matinogona kufamba, zita riri revapfura vanobudirira uye iro rinowanikwawo kuLinux. Iyi RPG ichauya yeWindows kutanga, asi zvakare inoshanda paLinux rutsigiro. Ose anotenda kune yakazvimirira studio Wyrmbyte. Iyo singleplayer zita rinogona kuburitswa muchirimo chegore rino 2019.
Mutambo wevhidhiyo wakafemerwa nenyaya imwe chete, yakagara pachitsuwa muHawaii, gadzira yakakura yakavhurika nyika iyo ichapa vatambi vane ruzivo rwakanaka kwazvo. Iwe uchafanirwa kushanda pamwe kana kupokana nenhevedzano yevanopikisa avo vachakuputira iwe mune yepashure-apocalypse nyaya umo mune vashoma chete vapenyu vakasara, uye mune izvo zvingave zvisiri nyore kuramba uri wevaya vakapona kwenguva yakareba kana iwe havakurumidze kupfura nepfuti…
Kunyangwe, sekutaura kwatakaita mundima dzapfuura, hakuzovepo kuLinux pakutanga, chete kune Windows chikuva, vagadziri vayo vataura nezve rutsigiro Linux, uye isu tinofanirwa kuve maricho, asi ichauya. Vanoti vanoronga kuimhanyisa paLinux futi, kunyangwe ivo vasingafunge kuti vachavaka chiteshi izvozvi, asi ivo vanoedza kuzviita nekufamba kwenguva. Ndosaka ndichiti izvo zvenguva iwe unofanirwa kuve nemoyo murefu uye kumirira ivo kuti vachengete yavo yekutaura.
Kuti uzive zvakawanda nezve mutambo wevhidhiyo, taura kuti yakavakirwa pa Graphics injini Unreal Injini 4 zvine simba kwazvo uye izvo isu tatoziva kare. Iwe unozogona kusarudza mana akasiyana mapato ekushanda kana kurwa nawo, uyezve iwe une kugona kwekugadzira uye kutaura nyaya muAshes yeOahu. Zvichienderana nesarudzo dzaunoita, iwe unozogona kufurira pakati peanopfuura zana magumo angangoitika emutambo wevhidhiyo uyu. Munyaya yese yenyaya, iwe unenge uine nhamba hombe yezvombo, uye vhura +4 mabasa matsva uye hunyanzvi, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Madota eOahu akavhurika nyika shooter yeLinux